रुपन्देहीमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्दै, कसरी थाहा पाउने कोभिड र भाइरलको फरक - News Book Online
रुघाखोकी ज्वरो आउँदा धेरैले कोभिडको आंसका पनि गर्ने गरेका छन्। तर यस्ता लक्षण देखिएका धेरैलाई कोभिड भने भइहालेको छैन। यो भाइरल ज्वरो भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका बरिष्ठ फिजिसियन डा. नन्दु पाठकले पछिल्लो एक हप्ता यता भाइरल ज्वरोका विरामी बढेका बताए । ‘हप्ता दस दिन जति भयो। सामान्य रुघा, खोकी र ज्वरोका विरामी बढेका छन्।’ उनले भने ‘यसरी ज्वरो आएर पनि कोभिड नेगेटिभ देखिएका धेरै हुनुहुन्छ ।’
कोभिड भएकाहरुमा जिउ दुख्ने समस्या बढी हुन्छ। भाइरलमा त्यो समस्या कम हुने डा. पाठकले बताए । कोरोना संक्रमण हुँदा बास्ना र स्वाद पनि हराउने गर्दछ । ‘भाइरल भएर रुघा लागेकाहरुलाई पनि बास्ना हराउने समस्या हुन्छ । तर स्वाद चाँही हराउँदैन ।’ डा. पाठकले भने। असार लागेपछि केही घटेको कोरोना संक्रमणदर पछिल्लो समय फेरि बढ्न थालेको छ । अहिले कोरोनाको परिक्षण हुन छाडेकाले लक्षण नदेखिएका तर कोरोना पोजेटिभ भएका धेरै जना समाजमा हुन सक्छन् । त्यस्ता संक्रमितलाई भाइरल भयो भने थप सताउन सक्छ ।
त्यसैले भाइरलको लक्षण देखिँदा पनि सचेत हुन र पिसिआर परिक्षण गराउन बरिष्ठ फिजिसियन डा. नन्दु पाठकको सुझाव छ । ‘सुरुमा रुघा, खोकी, ज्वरोदेखीएमा आफूलाई कोभिड भयो भनेर सोँच्नुपर्छ। अनि आफूलाई आइसोलेट गरिसक्नुपर्छ ।’ उनले भने ‘त्यसको २–३ दिन पछि पिसिआर गर्न सल्लाह दिन्छु। कोरोना पोजेटिभ आयो भने छुट्टै बस्ने, नेगेटिभ आयो भने परिवारसँगै बसे भयो।’ ज्वरो आउँदा दुबै अवस्थामा झोलिलो पदार्थ र सिटामोलको प्रयोग गर्नुपर्ने डा. पाठकले बताए।